‘भोकमरी र बैंकका किस्ताले मर्न बाध्य हामी नेपाली’ खोई कहाँ छ सरकार ? - Parichay Network
‘भोकमरी र बैंकका किस्ताले मर्न बाध्य हामी नेपाली’ खोई कहाँ छ सरकार ?
परिचय नेटवर्क द्वारा	 १ श्रावण २०७७, बिहीबार १६:४७ मा प्रकाशित
राज्यको गलत गदमका विरुद्ध सरकारलाई खबरदारी गर्दै पोखरामा ३० दिनदेखि निरन्तर प्लेकार्ड लिएर शिरिष गुरुङ एक्लै सडकमा उत्रिरहेकी छन् । जनताका लागि साधारण आवश्यकता पनि पुरा गर्न सरकारले नसकेको भन्दै कहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की अगाडी र कहिले चिप्लेढुङ्गामा पम्प्लेट सहित उभिएको देखिन्छिन् । सरकारको गलत कदमको विरोध गर्दै उचित कदम चलाउन दवावका लागि सडकमा आउनुपरेको उनी बताउँछिन् । ‘सरकारलाई दबाव नदिएसम्म केहि हुन सक्दैन । हामीले मात्र गरेर केही हुन सक्दैन । सरकारले चाहनुपर्छ । त्यसैका लागि मैले दवाद दिन यस्तो शान्तिपूर्ण विरोध गरिरहेकी छु ।’ – उनी बताउँछिन् ।
भोकमरी र बैंकका किस्ताले मर्न बाध्य हामी नेपाली, नेपाल आमा रुदै छिन्, राष्ट्रियता जोगाऔं, अव म घुस खाउँ कि बेसार, एमसिसि खारेज गरौं जस्ता वाक्य प्लेकार्डमा लेखेर उनी सरकारको विरोधमा छिन् । भ्रस्टाचार, एमसिसि, कोभिड १९, आत्महत्या, बैदेशिक हस्तक्षेप, क्वारेन्टिन व्यवस्थापनलगाएतका विषयमा भईरहेको गतिविधिमा सरकारले वास्ता नगरेको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन् –‘कतिन्जेल चुप बस्ने । देशको अवस्था देखेर निन्द्रा पनि लाग्न छाड्यो । शुरुवात कसै न कसैबाट गर्नै पर्ने हुँदा किन मैले सुरुवात नगर्ने ? म एक्लै भएपनि म अगाडी बढ्छु । मेरो आवाज सरकारसम्म पुग्ला नपुग्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर म पछाडी हट्दिन ।’
जनता सजग भएपनि सरकारलाई खबरदारी गर्न चियागफमा साथीभाईसँग गरेर नहुने उनको बुझाई छ । अहिलेको परिस्थितिमा शान्तिपूर्ण विरोध नै खबरदारी गर्ने उत्तम उपाए भएको उनको भनाई छ । उनी भन्छिन् –‘राज्यले जनतालाई गरेको व्यवहार देखेर अव हामी जाग्नु पर्छ भन्ने लागेर यसरी बसिरहेको छु । साथ धेरैको पाएको छु तर प्रायले बोलीबाट मात्र साथ दिनुभएको छ । आउनुहोस् आवाज उठाउनुहोस् तबमात्र राज्यसम्म आवाज पुग्छ । म एक्लैले केही हुँदैन तर म जस्ता हजारौं, लाखौं सडकमा उत्रिएर आवाज निकाल्न सक्यौं भने सरकारलाई उचित कार्य गर्न दवाव दिन सकिन्छ ।’
दिनहुँ आत्महत्याका घटना बढिरहेको अवस्थालाई रोक्न राज्य लाग्नुपर्ने उनको भनाई छ । कोभिड संक्रमणले ज्यान जाने भन्दा भोकमरीले ज्यान जाने अवस्था आएकाले राज्यले बेलैमा उचित कदम चाल्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । त्यस्तै राज्यमा भैरहेको भ्रस्टाचार अन्त्य गराउँन दवाव दिन, कोभिड १९ को रोकथाम, क्वारेन्टिनको अवस्था नाजुक भएकोले राज्यले सुधार्नुपर्ने उनको अडान छ । साथै देशलाई हित हुँदैन भने एमसिसि खारेज हुनुपर्ने उनको माग छ । उनी भन्छिन् –‘पिसिआर टेस्टिङ दायरा बढाउनु प¥यो । मरे पछि कोरोना संक्रमण थाहा पाएर के गर्ने ? पहिल्यै थाहा पाए पो उसलाई बचाउन सकिन्थ्यो । बैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध सरकार पछाडी हट्न भएन ।’
कहिले एक्लै त कहिले ५, ७ जनाको समूहमा देखिने उनी विशेषगरि युवावर्गले साथ दिईरहेको बताउँछिन् । सबैको साथ पाउने विश्वासका साथ अहिले उनी एक्लै भएपनि घामपानीको चिन्ता नमानी दिनहुँ १ बजेदेखि ४ बजेसम्म सडकछेउमा प्लेकार्ड सहित उभिएको देखिन्छिन् । उनी भन्छिन् –‘ मेरो आवाज रोकिदैन । म एक्लै भएपनि उभिने छु । ३ महिनासम्म त म एक्लै मैदानमा उत्रिन तयार छु । ३ महिनासम्म मैले धेरैको साथ पाउनेमा विश्वस्त छु ।’
राज्यलाई खबरदारी गर्न सबैको साथ आवश्यक भएको उनी बताउँछिन् । ‘म बसिरहदा नमस्कार तथा सलुट नै गर्छन् तर म नमस्कार र सलुट चाहेको होईन । तपाई पनि आएर उभिदिनुहोस् । राज्यसम्म आवाज पुराउन साथ दिनुहोस् । मेरो मात्र आवाजले केही हुनेवाला छैन । एकजना, दुईजना हुँदै लाखौका आवाज उठ्यो भने सरकारले उचित कदम चाल्न बाध्य हुनेछ ।’
मोबाईल र टिभिमा मात्र समय विताउनु भन्दा राज्यको गलत गतिविधिलाई खवरदारी गर्नलाई पनि समय छुट्टयाउनु पर्ने उनको भनाई छ । हामी अझै पनि सपनाकै संसारमा बाच्ने ? उनको प्रश्न थियो । उनी भन्छिन् –‘सपनामा मात्र बस्नु भएन । अव जाग्नुहोस् । हामीले आवाज उठायौं भने सरकारले राम्रो काम गर्न बाध्य हुनेछ ।’
नागरिकको शक्ति निकै ठुलो हुने भएकाले नागरिकबाटै राज्यको परिवर्तन आवश्यक रहेको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन् –‘नागरिकको आवाजमा ठुलो शक्ति हुन्छ त्यसैले राज्यलाई परिवर्तन गर्न नागरिकले सक्नेछ । अहिलेका नागरिक सचेत भएकाले नराम्रो गतिविधिको नागरिकले नै खबरदारी गर्नेछन् । गर्नु पनि पर्छ ।’